ဖိုးဖိုးဖွားဖွား ကျန်းမာရေး Archives - Page3of3- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Vitamins for Elderly People
လူကြီးများနှင့် လိုအပ်သောဗီတာမင် အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ ခန္တာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်တွေ အပြည့်အဝရဖို့ဆိုတာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ အစားအသောက်စားခြင်စိတ်နေတာ၊ သွားမကောင်းလို့မစားတာမျိုးအပြင် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းကလည်း စားသလောက်မစုပ်နိုက်တဲ့အခါ အချို့အချို့သော ဗီတာမင်တွေလိုအပ်လာပါတယ်။ အဲ့ထဲကမှ အလိုအပ်ဆုံးတွေကတော့ ဗီတာမင် B12 အာရုံကြောတွေအားကောင်းဖို့၊ သွေးနီဥတွေပုံမှန်ကြီးထွားဖို့၊ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဗီတာမင်ပြည့်ဝဖို့ဆို ငါး။အသား၊ ကြက်ဥ၊…
Geriatric Emotional Support
သူတို့အထီးကျန်နေကြတာ သင်သတိထားမိရဲ့လား? ကျွန်မတို့တက်ကြွစွာအလုပ်လုပ်သွားလာနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ အိမ်ပြန်ချိန်ကိုစောင့်ပြီး အထီးကျန်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသော မိဘ၊ သို့ အဘိုးအဘွားတွေပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်မတို့ဟာ လှုပ်ရှားရုန်းကန် ဘဝအတွက် အချိန်တွေပေးရင်းနဲ့ အနီးဆုံးလူတွေကို အချိန်တွေ မေတ္တာတွေပေးဖို့မေ့လျော့နေတတ်ပါတယ်။ မိဘတွေ အဘိုးအဘွားတွေကလဲ…
Old Age and Osteoporosis
ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတို့နှင့် အရိုးပွခြင်းအန္တရာယ် ” ဒေါ်ပုတစ်ယောက် ချော်လဲပြီး ပေါင်ရိုးကျိုးသွားလို့တဲ့…. ဆေးရုံတက်နေရတယ်….သတင်းသွားမေးပြီး ကြည့်ပေးလိုက်ပါဦး သမီးရယ်…” ဒေါ်ပုဆိုတာ အိမ်နားက အသက် 70 ကျော်အဘွားပါ… အိမ်နီးနားချင်းဆိုတော့ အမေတို့နဲ့လည်းခင်နေ…ကိုယ်တိုင်လည်း အဘွားဒေါ်ပုနေမကောင်းရင် တစ်ခါတစ်ခါသွားကြည့်ပေးဖူးပါတယ်… လူနာမေးတော့ သွားရဦးမယ်….အင်း…တလောကလည်း… အမေ့အသိအန်တီတစ်ယောက် …အဘွားဒေါ်ပုလိုမျိုးပဲ……
Diet For Over 70 People
အသက် ၇၀ ကျော် အဖိုးအဖွားတွေအတွက် အစားအသောက်ပုံစံ အသက် ၇၀ ကျော်လာတာနဲ့ အဖိုးအဖွားတွေဟာ အစားအသောက် ကြေးများလာတတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် “ဟိုဟာမစား သည်ဟာမစား ငါးခြောက်ဖုတ်နဲ့ညား” ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ? ၁။ အာဟာရ မမျှတခြင်း…
Nutrition and Lifestyle for the Older Person
ဘိုးဘိုးဘွားဘွား ဘာတွေစား အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်ပြီး လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စားသင့်တဲ့အသားအစာတွေဟာမတူညီကြပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်စားသင့်တဲ့အစားအစာ၊အရွယ်ရောက်ပြီးသူ တစ်ယောက်လိုအပ်တဲ့အစားအစာနဲ့ သက်ကြီးပိုင်းဘိုးဘိုးဘွားဘွားတို့ စားသင့်တဲ့အစားအစာတွေဟာ ကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြပါတယ်။ အသက်အရွယ်ရလာပြီဖြစ်တဲ့ ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတို့ ဘာတွေစားသင့်လဲ၊ သားသမီးတို့အနေနဲ့ ဖေဖေမေမေဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေကို ဘာတွေကျွေးသင့်လဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင် …. အမျှင်ဓာတ်ပါသော အစားအစာများ အသီးအနှံ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ပေါင်မုန့်၊ဆန်လုံးညို၊ပဲ…
အရိုးတွေနာလို့ ဆိုသော ပြဿနာ…. ယနေ့ ကြာသပတေးနေ့ ပရဟိတဆေးခန်း ထိုင်ရမည် ဆရာမ ဒေါ်ယမင်း ခြေလှမ်းတွေ သွက်လက်လို့ ပရဟိတဆေးခန်းဆိုတော့ လာတဲ့လူနာတွေက သက်ကြီးပိုင်းတွေချည်းပဲလေ အဲသည်တော့ လာသမျှ ဒူးနာ၊ ခါးနာ၊ အဆစ်အမြစ်နာ ဆရာမ ဒေါ်ယမင်း ရှင်းပြရတာ…
All Articlesဖိုးဖိုးဖွားဖွား ကျန်းမာရေးအခြားရောဂါများအထွေထွေရောဂါများ
Hot Packing For Joint Pain
အဆစ်နာတဲ့ လူနာတွေ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်း ဆရာမ ဆေးမပေးဘူးလား၊ ဆေးမထိုးဘူးလား ဒေါ်ယမင်း တစ်ယောက်တည်း အတွေးကတော့ နာတိုင်း ဆေးသောက်၊ ဆေးထိုးတာ မကြိုက်ဘူး လာပြတဲ့ လူနာအပေါ် မူတည်တယ်လေ လာပြတဲ့ လူနာက အရမ်းကိုက်ခဲ နာကျင်နေရင်တော့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးလေးထိုး၊…